Rima Nhema Matema paMazino ayo Asiri eCavitiestooth - Hutano
foni inodzima yega iphone
ndingaite sei kuti ndione yangu iphone skrini kutenderera zvakare?
Maitiro ekuziva kana ndine tikiti rekufamba
sei isiri yangu iphone yekuvandudza
Dark Spots Teeth That Aren T Cavities
Nerima dema mavanga pameno asiri makomba? . ✅ Waizviziva here kuti hadzisi dzose nzvimbo dzine rima dzakavharwa? Vanhu vanoenda kunetseka zvikuru kuna chiremba wemazino nekuti vaona a kusviba pamazino avanoshamwaridzana nemapako. Ndokusaka nhasi, tichida kujekesa kuti ivhu uye kuti mamwe mavara anogona kuoneka.
Chii chinonzi mhango?
Saka ngatitangei netsananguro; Caries ndiko kuparadzwa kwemaviri ezino inokonzerwa neacidic yebhakitiriya plaque. Icho chirwere che multifactorial mavambo ari kubatanidzwa machiri, chikafu ( kunyanyisa kushandiswa kweshuga ), utsanana hwemazino, enamel kusagadzikana, genetics uye morphology, uye mazino malposition.
Mune mamwe mazwi, kana mumwe munhu asingakwanise kudzivirira kudya shuga yakawanda achitarisira zvakanyanya hutsanana hwemazino uye orthodontically inogadzirisa kukanganisa kwemazino, zvingangoita kuti vasaite maburi.
Ndeapi mavara matema pameno?
Hutsanana hwemazino hwakanaka hwakakosha kana zvasvika pakuve nemazino ane hutano uye akasimba. Panobuda mavara matema pamazino kana zvimwe akasiyana shades anogona kubva kubva chena kusvika kune yakasviba brown , zvinoreva kuti tine dambudziko uye kuti tinofanira kubvunza chiremba wemazino wedu.
Zvakare, kushatisa pamazino kunogona kutsamwisa uye kusagadzikana. Chaizvoizvo, izvi ndizvo dambudziko rakajairika kupfuura zvatinofunga . Haisi chete dambudziko rekushongedza asi rinogona kuvanda kuseri kwemubvunzo une chekuita nebhakitiriya plaque kana chikafu chinoshomeka mune zvinovaka muviri kana zvisina kukwana.
Sei mavara matema achionekwa pameno angu?
Zvinhu zvakawanda zvakasiyana zvinoshanda pane enamel uye kusvibisa zino. Zvichienderana nezwi remavara, izvo zvikonzero zvinogona kuwanikwa mune chimwe kana chimwe chikonzero.
Iyo decalcification yezvidimbu zvemazino zvinogona kuzvikonzera. Izvo zvinoitikawo kana orthodontic zvishandiso zvinobviswa , uye hutsanana hwemazino hahuna kuteverwa.
Inogona kuve nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana kubva pakudya chikafu chine acidic, bruxism, kana kukwesha kwakanyanya . Kwete chete zvinotsamwisa nekuda kweshanduko yerudzi, asi zvinogona zvakare kukanganisa kunzwisisika kwemazino. Zvinogona kukonzera kudzikira kweiyo enamel, inova dziviriro. Naizvozvo, aya madonhwe anogona zvakare kunyanya kukanganisa kusanzwisisa kana uchidya chikafu chinotonhora kana chinopisa.
Brown kana nhema matema:
Kunyangwe ivo vachinyatso kuoneka kupfuura yero, nhema matema pameno zvinowanzo kuve nyore kubvisa nekuti iwo akanyanya kuwanda mavara . Zvinogona kukonzerwa nekudyiwa kwekofi kana fodya, pamwe newaini kana tii. Zvinhu izvi farira mukana wecaries , saka zvakakosha kuti uende kuna chiremba wemazino kuti uite kuchenesa kwakadzika uye kubvisa.
Maitiro ekudzivirira kuoneka kwemavara pamazino
Nzira yakanakisa yekudzivirira kuoneka kwemavara matema pameno, kana mamwe mavara, ndeye ziva zvikonzero uye tora matanho akakodzera ekuzvidzivirira . Chekutanga pane zvese, zvakakosha kuti uve nehutsanana hwemazino hwakanaka, hunosanganisira kukwesha mazino ako mushure mekudya kwega kwega, uchishandisa mazino floss mukuwedzera kubrashi. Zvakare, zvakakoshawo kushanyira chiremba wemazino kanokwana kamwe chete pagore kuti uite ongororo yegore nekuchenesa.
Maitiro ekubvisa matema matema pameno
Kuti ubvise mavara, iwe unofanira kutanga waziva chikonzero. Mupfungwa iyi, zvakakosha kuti tarisai mushonga wemazino watinoshandisa , sezvo vamwe vanogona kudaro hasha ne enamel , iyo pakupedzisira inenge isingabatsiri maererano nemavara.
Chiremba wemazino anogona kutibatsira ne kuchenesa mazino , iyo inobvumidza kubvisa matinji kubva pamazino chero bedzi iwo ari emhando yepamusoro. Imwe sarudzo ndeye kuiswa kwe mazino veneers , iyo inobvumira kubvisa mavara anooneka zvakanyanya anokanganisa aesthetics yemuromo , kunyanya kana ichiita semeno machena uye ichimisa dambudziko kana zvasvika pakunyemwerera kana kukonzera kunyadziswa mumurwere.
Kukosha kwekubvisa tsvina
Izvo zvataurwa, kwete rima rega rega pameno ako kuora kwemeno. Kuti ive mhango, inofanira kusanganisira kuparadzwa kwezino. Semuenzaniso, ma molars anogara aine magero madiki pane avo ekutsenga pamusoro kuti anyatso kukuya chikafu. Uye nguva zhinji, aya maburi akatetepa zvekuti anogona kushatiswa pamusoro pemakore asi ari kungova zvinyadzo zvepamusoro izvo hazviparadze meno emazino. Chimwe chikonzero chemavara erima anogona kuoneka pameno ndeye tartar, uye izvi zvinogona kungobviswa nekuchenesa kana prophylaxis muhofisi yemeno.
Izvo zvakakoshawo kuti uzive kuti haazi makomba ese akasviba; pane chena uye shava. Ivo vachena ndivo, pachokwadi, vane hukasha, saka zviri nyore kuti uvaone nekukurumidza.
Chii chinogona kukonzera kuoneka kwemavara matema pameno?
Kunze kwematambudziko enamel, kana kuunganidzwa kwemazino tartar , vanogona kuoneka nekuda kwezvimwe zvikonzero.
Kunwa zvakawanda kofi, nhema tii, kana waini, pamwe nekusvuta , Inoita yako mazino akasviba . Iwe unofanirwa zvakare kudzivirira izvo chikafu chinosvibisa mazino ako zvakanyanya .
Muzviitiko zvakawanda, matema mavara anogona kuva kuora kwemeno izvo zviri kufambira mberi, uye iro zino enamel rakaparadzwa.
Chimwe chinowanzo kukonzera chinokonzeresa matema mavara pameno ndiko kushandisa kwenguva refu kwe kushambidza muromo vane chlorhexidine .
Kana izvi zvikonzero zvabviswa uye makwapa akacheneswa, unogona kuita mazino machena kuti uwane kunyemwerera kwakanaka.
Nzira yekubvisa matema matema uye tartar?
Pane marapirwo akasiyana siyana kubvisa tsvina pamazino. Kunyangwe chinhu chekutanga kuziva chikonzero chayo. Kurapa kwekutanga kwemavara aya kana tartar kunoitwa kuburikidza nekuchenesa mazino uye kunodzivirira mamwe matambudziko akakomba kuhutano hwako hwemazino.
Eya, aya anongova mavambo ekuparadzwa kunogona kuitika kwepfupa panogara meno edu. Sezvo, sezvatakataura, aya mavara haasi chinhu chinopfuura tartar pameno, uye izvo zvinogona kufambira mberi kupinda mu chingamu kukonzera periodontitis .
Ivo vari musumbu webhakitiriya izvo zvinonamatira kuzino, uye kunyangwe isu tisingazvione kana kuzviona. Aya mabhakitiriya, akambosungirirwa pazino, anogadzira tartar yemazino, iyo inotanga rwendo rwayo yakananga mukati uye zvishoma nezvishoma inobvisa chingamu kusvika yasvika pabhonzo nekuiparadza. Kuti uibvise, hunyanzvi hunodaidzwa kuti mushonga wemazino , uye midzi kuronga kunoshandiswa .
Zvinogona kuita senge zvakaomesesa nemazita, asi iri nyore uye ine hunyanzvi nzira iyo chiremba wemazino, anopihwa nhevedzano yezviridzwa zvidiki, zvishoma nezvishoma anodzika tartar pasina kukuvadza matadza.
Izvo zvinofanirwa kuyeukwa kuti yakapusa tsika yekunatsa kuchenesa haibvise dambudziko uye kuti kunyangwe hazvo kuchenesa kwakawanda kwatinoita, kana tikasarapa kuunganidzwa kwebhakitiriya, tinogona kutorasikirwa nezino.
Ndezvipi izvi zvese zvakasviba zvakakonzerwa?
Izvo zvakakoshawo kuti uzive zvikonzero. Ndezvipi izvi zvese zvakasviba zvakakonzerwa?
Genetics inokanganisa kukura kwavo, uye saka ita tsika dzako. Kusvuta, semuenzaniso, ndechimwe chezvikonzero zvinotungamira zvemazino. Zvekudya zvakaita kofi kana waini tsvuku zvakare ita kuti iratidzike.
Izvo zvakakoshawo kuti uzive kuti rudzii rwevara, nekuti kurapwa kwacho kunogona kusiyana. Mavara akajairika ndeepamusoro. Ivo vane rima toni uye zvinokonzerwa nehutsanana hwemuromo kana zvimwe zvekudya zvakaita sekofi.
Muzviitiko zvakawanda, mavara aya anobviswa zviri nyore nehunyanzvi hwekuchenesa mazino. Mune zvimwe zviitiko, iwo mavara anogona kuve akapfava kana epamukati dhipoziti, ayo anokura pakati pematadza uye ari kunetsa kubvisa.
Makiyi ekubvisa mavara pameno
Utsanana hwakanaka kumba uye kurapwa kwehunyanzvi ndiyo ichave kiyi yekubvisa matanga:
Kubudirira kwehutano hwemuromo
Chinhu chakanyanya kukosha mukudzivirira huturu hwakanaka hutsanana hwemuromo. Inokurudzirwa kukwesha mazino ako mashoma kaviri pazuva. Zvakare, shandisa muromo kudiridzira, kushambidza muromo, uye mazino floss.
Unyanzvi hwekurapa kubvisa tsvina
Nyanzvi kuchenesa mazino inogona kudzivisa kuoneka kwemavara. Imwe sarudzo ndeyekuita mazino machena, ayo anovhenekera kunyemwerera kwakasiyana mumvuri.
Kumakiriniki ePropdental, isu tinoitisa mazino kuchenesa pamwe nemwenje yakatungamirwa, kuitira kuti ive inopesana nekunyemwerera kwako.
Kunyangwe isiri yekurapa kwechishamiso, vanogona kushanda senzira yekuchengetedza.
Kune akasiyana mazino ekushambadzira pamusika wemeno ekuchenesa. Usati waashandisa, bvunza chiremba wemazino wako, sevamwe inogona kuva hasha kwazvo kumeno ako .
Kofi inokwezva kwazvo mangwanani, asi inogona kukonzeresa kuti mavara aonekwe.
Inokurudzirwa kudzora kudyiwa kwezvikafu zvinofarira kuumbwa kwazvo. Waini tsvuku, nhema tii, bheethi zvinogona kushatisa meno ako.
Shanyira chiremba wemazino nguva dzose
Mazhinji pathologies haaonekwe kune ziso rakashama nevarwere. Izvo zvakare zviri nyore kuendesa kusahadzika kwese kuna chiremba wako wemazino.
Destist ichaita yakazvimirira kudzidza kuti uchinje kurapwa kune zvaunoda, uye unogona kunyemwerera zvakare pasina zvivakwa.
Une here mavara matema pameno ako uye usingazive nei? Izvo zvaizobatsira kana iwe ukaenda kuna chiremba wemazino kuti unoongorora uye kurapwa kuti ubvise.
Dental caries (kuora kwemeno) kune vakuru (makore makumi maviri kusvika makumi matanhatu nemana). (2014).
Mazino enamel kukanganisa uye chirwere chechiliac. (2014).
Hutano hwemeno uye hutano hwemwoyo. (2013).
Fluorosis chokwadi. (nd).
Ammonium Lactate Lotion Yerima Mahara
Zvaunofanira kuita kana Mazino Ako Achichinja Mushure mekurapwa (matipi)
Nzeve kanari kuzvimba - Kushambira Nzeve (Otitis…
Unotambura nemazamu anonhuwa? Izvi zvinogona kuve zvikonzero
Earache: Zviratidzo, Zvinokonzera, Kurapa, uye Kudzivirira